Bini’aadamka wuxuu ubaahan yahay dhibaatooyin nololeed waayo waa lagama maarmaan in lagu raaxeysto guusha. - APJ Abdul Kalam - xigasho Pedia
Annaga, bini-aadamka waxaan leenahay u janjeera in lagu qabto farxadda. Hadday farxaddu sii dheeraato, Waxaan u maleynaynaa inay tahay jidka nolosha. Waxaan rajeynayna inay kordhaan waxaanan dareemaynaa inay tahay wax cusub. Waxyaabaha ayaynu u qaadannaa wax qiime ah mana qiimeyn karno sidii aan markii hore haysan lahayn oo dhan.
Laakiin waa inaannaan u shaqeynin sidan. Waa inaan ka feejignaano waxa aan heysano oo aan uga mahadcelino taas. Wax kasta oo aan haysanno si ka badan, waa inaan ku deeqno dadka kale ee u baahan kara. Tani waxay bulshada ka caawin doontaa koritaanka iyo horumarka iyada oo aan la abuurin kala duwanaansho ballaaran oo udhaxeysa kuwa ku raaxeysta nolol wanaagsan kuwa aan nasiib u laheyn.
Markay dhibaatooyinku na dhacaan, waxaan dareemaynaa tanaasul ka dib waxaanan garwaaqsan nahay qiimaha wakhtiyadii fiicnaa ee aan soo qaadannay. Annagu garan mayno markay musiibo dhacdo. Marka, waa inaan uga mahadnaqnaa daqiiqad kasta oo wanaagsan oo aan haysano.
Markaan dhibaatooyin la kulanno waxaan fahamsanahay qiimaha dhabta ah ee waxkasta oo aan u qaadanay inaan si qumman u qaadan karno. Markay xilliyadii adkaa dhammaadeen oo aan haddana aragno wakhtiyo wanaagsan, ka dib innaguna waan sii raaxaysanahay. Sababta oo ah waa inaan ognahay sida aan u seegnay ama sida mudnaanta leh ee aan runtii u nahay inaan heli karno guusha aan maanta aragno.
Waqtiyada adag, rajo beel baa luntay laakiin markii aan ka soo baxno, waxaan fahansanahay qiimaha waxa aan muddo dheer sugaynaynay, xitaa in ka badan. Sidaa darteed, labadaba adag, iyo sidoo kale wakhtiyada farxadda leh, waxay naga caawinayaan qaabaynta shakhsiyaadka aan ugu dambeyntii noqon doono.
Dhibaatooyinka Noloshu Ka Dhaxeyso Sawirro
Qodobo caan ah
Dhibaatooyinka Noloshu waxay xigtaa odhaahda
Xigashooyinka dhiirrigelinta ee guusha shaqo
Xigashooyinka togan ee ku saabsan caqabadaha nolosha
Xigashooyinka ku saabsan Guusha iyo Shaqada adag
Xigashooyin Gaarasho Gaaban
Haddii aad rabto inaad u iftiimiso sida qorraxda, marka hore u gub sida qorraxda oo kale. - APJ Abdul Kalam
Haddii aad rabto inaad u iftiimiso sida qorraxda, marka hore u gub sida qorraxda oo kale. - APJ Abdul…
Waa inaanu is dhiibin oo ma ogolaan karno dhibaatada inay na jabiso. - APJ Abdul Kalam
Jahawareerku ma aha astaamaha cilmi nafsiga aadanaha. Si kastaba ha noqotee, xaaladaha qaarkood waxay yimaadaan meesha aan dareemeyno inaan bixinno…